यस्तो पनि पर्यटन ?
१ घण्टे लज बसाइले कसरी होला पर्यटनको विकास ?
१०५२ पटक पढिएको
समयः सोमबार बेलुका साँझ छ बजे
स्थानः साँघुरीगढी गाउँपालिकाको नाम्जे
मौसमः शरीरमा काँडा उम्रने जाडो एवं चिसो हावा बहिरहेको
पात्रहरूः आधुनिक युवा र म
तातो धरानलाई केही क्षण भुलौं भनेर बेलुका साँघुरीगढीको नाम्जे पुगेको थिएँ । लुगा धरानमा लगाएकै हाफपेण्ट र भेस्ट थियो । सवारी साधनबाट ओर्लनेबित्तिकै थाहा भयो चिसो हावा सररर चलिरहेको रहेछ । पाखुराभरी काँडाहरू एक्कासी उम्रिए । असोजको धरान छोडेर त्यहाँ पुगेको त्यहाँ त पुस लागिसकेको रहेछ ।
सुनसान उकालो बाटो र खुड्किला उक्लिँदै नाम्जेको आकर्षण ‘आत्माघर’ तर्फ चढ्दा बाटोमा केवल चिसो हावा र रूखहरूमा त्यो ठोक्किएर निस्किएको एकोहोरो ध्वनि स्वाँ...मात्र कानमा प्रवेश गरिरहेको थियो । आत्माघर जाने बाटोमा वास्तवमै नामजस्तै निर्जन र भयावह अनुभव भइरहेको थियो ।
उकालोले पसीना ननिकाले पनि एकाएक शरीर तातो हुँदै आयो । पृष्ठभूमिमा कुनै भयानक प्रेतात्मा प्रधान चलचित्रमा जस्तो आवाज र जीवन्तताको नामोनिशान नदेखिएको उक्त उकालो चढाइको अवधिभर मभित्रको आत्मा काँपिरह्यो । आत्माघरमा जाँदै गर्दा आत्मा नै भयातुर हुनु कस्तो आश्चर्य ? हुन त मान्छेहरू पनि मान्छेसँगै त हो डराउने अनि आत्मा आत्मासँग किन नडराओस् त ?
सर्वप्रथम त डर अनुभव गर्न त्यहाँको नाम काफी थियो । त्यसमाथि साँझको बेला, टाढाटाढासम्म मानिसको अस्तित्व नदेखिएको निर्जन स्थान, अझ मौसमले पनि डर बढाउन आफ्नो भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेकै थियो । कुहिरोले ढाकिएको डाँडाको शिरमा उछिट्टिएर भीरमा ठडिएजस्ता देखिने लालीगुराँसका बोटहरू साँच्चै कहालीलाग्दा देखिन्थे ।
सन्ध्याले लगभग छोपिसकेको समयमा जाडोले काम्दै आत्माको घरभित्र हत्तपत्त पसेको मात्र थिएँ म त शीताङ्ग भएँ । मुटु जोडजोडले धड्कियो अनि डरले शरीरभर एक प्रकारको अनौठो विद्युत तरङ्ग प्रवाहित गर्यो । म सँगसँगै उति नै हस्याङफस्याङ गर्दै एक युवती र दुई युवक आत्माघरको भुइँबाट जुरूक्क उठे । अस्तव्यस्त केश मिलाउँदै उठेकी युवतीको अवस्था स्यालले आक्रमण गरेको पोथी कुखुराको जस्तै थियो ।
सङ्कोच र शरमले कहिले बास नगरेको उसको अनुहारमा कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया देखिएन । कस्तो अचम्म ? एउटी नारीमा नारीको गहना अर्थात् लज्जाको रतिभर उपस्थिति छैन । दुई युवकले त झन् शिकारलाई गुलेलीले हान्ने बेलामा कसैले हल्ला गरेर शिकार धपाइदिएपछिको शिकारीको जस्तो बल्ढ्याङ्ग्रे आँखाले काँचै खाउँला झैं गरेर मलाई हेरे । धक र शरम केही नमानी तिनै जना तीव्र गतिमा मेरै आडबाट पार भएर ओरालो लागेर अदृश्य भए ।
उनीहरूको गतिसँगै रक्सीको तिखो गन्ध पनि मेरो नाकमा पस्यो । अनि पो म वास्तविकतामा उत्रिएँ । समाज आधुनिक भएको हो वा पुस्ता अधोगतिमा कुदेको हो सबैको ध्यान यौनतिर मात्र छ त ?
म पनि त्यसपछि खुरुखुरु ओरालो लागेँं । तल डाँडाको फेदमा, त्यो आकर्षक प्रवेशद्वारको नजिकै बनाइएको फलैंचामा २ जना युवक चाहिँ बसेका थिए । युवतीको अत्तोपत्तो थिएन । म नरोकिई पार भएँ तर मेरो कानले पुरूष आवाज सुनिहाल्यो ।
‘यो मा.....आज नआएको भए काम भइहाल्थ्यो ।’
त्यहाँबाट सरासर खाजा खान भनेर एउटा सानो होटलभित्र पसेर खानेकुरा मागेर पर्खिन थालें । मेरै अगाडिको टेबुल भएको कुर्सीमा एउटा उत्तर आधुनिक देखिने युवक आएर बस्यो । मकैको जुँगा रङको कपालमाथि कालो चस्मा लगाएको उसले आफ्नो बाँसजस्तो पातलो जिउमा गम्लङ्ग ज्याकेट लगाएको थियो । जाडो हुन्छ भनेर उसलाई पहिले नै जानकारी भएको प्रमाण त्यही लगाएको ज्याकेट थियो । केही बेर चुरोट खाँदै बसेको केटो एक्कासी सडकमा पुगेर बाटोको परसम्म हेर्यो । लाग्थ्यो ऊ कसैलाई अधैर्य भएर पर्खिरहेको छ । ऊ फेरि आफ्नो कुर्सीमा आएर चुरोटको धुवाँमा आफूलाई र आफ्नो भविष्यलाई उडाउन थाल्यो । म पनि उसलाई अनि उसको गतिविधिलाई अध्ययन गर्दै आफूले मगाएको खाजा आइसकेकाले खान थालें ।
एकछिनपछि एउटा स्कुटी बाहिर आएर रोकियो । एउटी केटी पछाडि राखेर आएको अर्को एउटा केटाको हुलिया लगभग पहिलो केटोको जस्तो नै थियो फरक यति थियो कि उसले चाहिँ चुस्स परेको दारी थियो । यसले पनि आर्मीको कम्ब्याक ओढेको थियो । तर बिचरी केटीको अवस्था नाजुक थियो । स्लिभलेस टिसर्ट लगाएकी ऊ लगलग कामिरहेकी थिई । तलको लाज मात्र एउटा अम्मल भरको हाफपेण्टले थामेको थियो । खुट्टामा मोजाबिना नै क्यान्भास लगाएकी थिई । मुखमा लगाएको सानो बुट्टे मास्कले उसको जाडो थाम्न नसकेकोले बाफको धुँवा मास्क छिचोलेर बाहिर निस्किएको देखिन्थ्यो ।
पहिलो युवक स्वागत गर्न बाहिरै पुग्यो । स्कुटीमा आउने केटोसँग हात मिलायो । आफ्नो हातको सल्केको चुरोटको ठुटो पनि स्कुटीमा आएको केटोलाई भिडाएर केटीतर्फ फर्कियो । केटोसँग केवल हात मिलाएको उसले केटीलाई भने गम्लङ्ङ अङ्गालो हालेर ‘हग’ गर्यो । अनि उसको काँधमा हात राखेरै होटलभित्र पसेर त्यही टेबलको कुर्सीहरूमा तिनै जना बसे ।
उनीहरूको सबभन्दा पहिलो अर्डर नै ‘लोकल गुराँसको बुज’ थियो । जाडो भगाउनका लागि भनेर केटीले पनि चुरोट तानेर धुँवा उडाउँदैथिई । उसको भविष्यजस्तै धुँवा पनि एउटा बक्ररेखामा अनिश्चित गन्तव्यतर्फ हराउँदै उडिरहेको थियो ।
स्कुटीमा केटी ल्याउनेले खोइ कुन चाहिँ लजमा कोठा बुक गरेको तर १ घण्टा मात्र बस्न मिल्ने बतायो । अर्को युवकले प्रश्नवाचक ढङ्गले केटीलाई हेर्यो । केटीले स्वीकृतिमा टाउको हल्लाई । छिटो गरौं न त भनेर स्कुटीवालाले भन्यो । तिनै जनाले रक्सीको चुस्कीसँगै सितनको रूपमा मगाएको ‘पोर्क फ्राइ’ को स्वाद हतारमै भए पनि लिन थाले ।
म भने नाम्जेको पर्यटनको विकास, होमस्टे, रातारात निर्माण भइरहेका होटल र लज अनि युवाहरूले पर्यटनको रूपमा बुझेको भिन्नै पाटो गम्भीरतापूर्वक सोच्दै बसें । १ घण्टे पर्यटनले आर्थिक पाटो त व्यवसायीहरूको सबल बनाउला तर समग्र स्थानको नाम बदनाम गराउन पनि यसले भूमिका खेल्छ भनेर स्थानीय सरोकारवालाहरू सचेत हुन जरूरी छ ।